Edgar Allan Poe aive shasha yakashongedzwa nekushushikana. | Zvazvino Zvinyorwa
Edgar Allan Poe, izwi rekuora mwoyo
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Type, Nhema nhema, Nhetembo, Nyaya
Edgar allan Poe: izwi rekuora mwoyo.
Edgar Allan Poe akaberekerwa muBoston muna Ndira 19, 1809, kufa makumi mana chete gare gare muBaltimore muna Gumiguru. Kana iwe ukafunga nezvazvo zvishoma, zvinoita sekunge mambo wekutyisa uye pfupi nyaya anga asarudza mwedzi maererano nehupenyu hwake.
Munyori weAmerica anozivikanwa akafa akapoteredzwa neara yezvakavanzikaZvese zvikonzero zvekufa kwake uye tsananguro yemazwi ake ekupedzisira zvinoramba zvakavanzika. Chiitiko chekuenda kwake chinowanzoita greycale yematsotsi ake ematsotsi.
1 Zvishoma zvenyu nhoroondo
1.1 Jaya rakasiiwa nababa uye naamai varo vakafa
1.2 Kugamuchirwa uye kushungurudzwa mudzimba
1.3 Kugara kwako muScotland neEngland
1.4 Poe uye kufa
1.5 Jaya rakanyarara
1.6 Imba inorambidzwa uye kufa kusingatarisirwi
1.7 Kukundikana kuzviuraya kuedza uye kufa kunoshamisa
2 Poe uye kuora mwoyo
Zvishoma zvenyu nhoroondo
Jaya rakasiiwa nababa uye naamai varo vakafa
Poe aive wechipiri pavatatu vana vehama vakasiiwa nababa vavo, uye kuti vakapedzisira vave nherera pakafa amai vavo gore rakazotevera. Mukoma vakagara nasekuru nasekuru vake, saka akaramba ari pasi pavo.
Kugamuchirwa uye kushungurudzwa mudzimba
Ukuwo, Poe nemunun'una wake vakapihwa kurerwa. Vaviri vakagamuchirwa nemhuri dzaichengeta. Edgar akasara ipapo ndokutora zita rekupedzisira remhuri yekurera, Allan, kunyangwe iye asina kumbobvumirwa zviri pamutemo.
Poe anga achitouya kubva kune inoshungurudza chiitiko, uye Kunyangwe amai vake vokurera vaimuda zvikuru, baba vake vokurera vaiva murume ane mhirizhonga uye aishusha. Izvi zvakakonzera kuti amai, kuitira kuti vamuchengete, vakamudzivirira zvakanyanya kuti vadzivise baba vokurera kuti vasazomurwisa.
Kugara kwako muScotland neEngland
Munguva yekukura kwake munyori aigara kuScotland neEngland, uye nzvimbo idzi dzakazvitaridza nenzira yakakura netsika yavo, tsika nemagadzirirwo. Pakati petsamba dzakabva kumakore iwayo zvinogona kuonekwa kuti amai vokurera vaPoe, Frances, aive akaora mwoyo uye kuti munyori akamuperekedza achirwadziwa.
Poe uye kufa
Rufu rwaiita kunge rwuchamunetsa. Pazera remakore gumi nemana aive nekutanga kupwanya mai vewaanodzidza naye, kwaakatsaurira nhetembo "Kuna Helen", nguva pfupi mushure mekufa kwamai vadiki.
Aive akanyarara kuyaruka aine dambudziko rekubatana nenyika yekunze., ane hunhu hwakasimba uye izvo zvaisatsigira kubiridzira kana hutsinye hwemashoko.
Imba inorambidzwa uye kufa kusingatarisirwi
Kukura kwake akave akaenzana anozvibata murume, azere nehope dzinomutambudza kusvika kumagumo. Akaroora hama yake yemakore gumi nematatu Virgina Clemm muna 13. Makore masere gare gare mukadzi wechidiki akatanga kuratidza zviratidzo zvakajeka zvezvinozivikanwa setibhii.
Edgar akatanga kunwa uye kushandisa laudanum (anotenda), nekuda kweiyo opiamu zvirimo, kugadzirisa marwadzo. Zviripachena kuti panguva ino Poe akawira mukushushikana kwakadzama kwaaisazobuda. Virginia akafa muna 1947 kubva kuchirwere chetibhii.
Kukundikana kuzviuraya kuedza uye kufa kunoshamisa
Kwapera gore Poe akaedza kuzviuraya ne laudanum, asi akatadza. Akadzokera kuBaltimore ndokutanga hukama nemusikana wekare. Zvikanzi akataridzika achifara uye zuva rekuroora rakatemwa Gumiguru 17, 1949.
Edgar Allan Poe akatorwa.
Zvisinei nekufungidzirwa kubatanidzwa, Poe akanyangarika kusvika Gumiguru 3, paakawanikwa ari mune yakashata, achipenga. Mazuva mana gare gare Poe akaonekana nenyika asi achidana mumwe Reynolds uye akavhara nemweya wekupedzisira "Mwari batsirai mweya wangu murombo!". Nehurombo, uye senge mune dzakawanda kesi, paive mushure mekufa kwake ndipo paakatanga kuzivikanwa.
Poe uye kuora mwoyo
Nyaya yake inyaya mhenyu yekushungurudzika, yake yakazara-yerufu ngano chiratidzo chakajeka chekurasikirwa kwake.. Munyori haana kumbobvira abatsirwa, nekuti panguva iyoyo zvaisaita, saka hupenyu hwake hwaigara huchifamba pamuganhu pakati pehutano nehurwere hwepfungwa.
Mumashoko ake, gunguo munhetembo yake rakavakirwa pane shiri iri kutaura naDickens, asi kushungurudza kwake, minhenga nhema, uye kurova kunorwadza kweshiri kunoenderana zvakanyanya nerondedzero yekushushikana. "Iyo Tell-Tale Moyo" uye "Iyo Nhema Katsi" kuratidzira kwakajeka kwekuti mhosva inokanganisa sei uye inopengesa vanhu. Mhosva ndeyekuti yakashata hanzvadzi yekuora mwoyo, uyo anogara achiuya akabata ruoko rwake uye anonzwika munzeve yemumwe munhu.
Edgar Allan Poe anga ari munhu anotambudzwa zvekuti akafa pakati pehurombo nekuti aisakwanisa kusimbisa peni yake. Kushungurudzika kwakamubvisa kubva pazera rekuyaruka uye haana kumbomira kuoneka munzira yake, mune dzake nyaya uye zvinyorwa. Sekungozadza kwakaita Garrick nyika yenhetembo nekuseka kunyangwe aine buri pamoyo pake, Poe akazadza mabhuku nekutyisa nekuda kweburi rake mumoyo make.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Edgar Allan Poe, izwi rekuora mwoyo
Hupenyu nebasa raJuan Rulfo
Nhevedzano yenjodzi dzakashata